Noraràn’ny Governemanta Shinoa Any Anatin’ny Fitateram-bahoaka Ny Hijabs, Volom-bava Lavabe Sy Ireo “Fitafy Tsy Araka Ny Tokony Ho Izy” · Global Voices teny Malagasy
Noraràn'ny Governemanta Shinoa Any Anatin'ny Fitateram-bahoaka Ny Hijabs, Volom-bava Lavabe Sy Ireo “Fitafy Tsy Araka Ny Tokony Ho Izy”
Voadika ny 21 Aogositra 2014 16:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Español, Türkçe, English
“Fitafy dimy tsy araka ny tokony ho izy” voaràra eny amin'ny fitateram-bahoaka ao an-tanànan'i Karamay ao Xinjiang nandritra ny Lalao Fanatanjahatena Xinjiang faha-13. Sary avy amin'ny mpisera Twitter @uponsnow
Nanambara ny fandraràna ny fitafy sy endriky ny volo “tsy araka ny tokony izy (mivaona)” misy ifandraisana amin'ny Miozolomana any anatin'ny fitateram-bahoaka ny governemantan'ny tanànan'i Karamay ao Shina, mba hisorohana izay mety ho hetsiky ny mpampihorohoro mandritra ny Lalao Fanatanjahantena Xinjyang faha-13 nanomboka tamin'ny 8 hatramin'ny 20 Aogositra 2014.
Nivoaka tamin'ny 4 Aogositra ny fanambarana miaraka amin'ny afisy mampiseho izay lazaina fa “fitafy dimy tsy araka ny tokony ho izy”. Mpisera Twitter @uponsnow nanasongadina izany vaovao izany tamin'ny fandefasana ny kopian'ilay afisy :
Voaly manarona tava, hijab, burqas, fitafy ahitana volatsinana sy kintana ary ny lehilahy manao volombava lavabe – voaràra any anatin'ny fitateram-bahoaka ireo karazana fitafy dimy voalaza eo ambony ireo. Voaràra ny fitafy ahitana volatsinana sy kintana.
Mihenjana dia mihenjana ny fifandraisana eo amin'ny vahoaka Oyghur ao amin'ny faritra Xinjiang andrefan'i Shina sy ny governemantan'i Shina. Matetika niafara tamin'ny fifandonana nahafatesana olona ny fifandonana eo amin'ireo mpikatroka Oyghur sy ny manampahefana. Nilatsaka ireo fepetra famaizana ankehitriny taorian'ny fipoahan'ny fitroarana ara-poko nihoso-drà tao an-tanànan'i Kachgar tamin'ny 28 jolay. Sivily 37 no namoy ny ainy, ary nitifitra nahafaty olona 59 ahiahiana ho mpampihorohoro ihany koa ny polisy.
Nanamarika i Charles Liu avy ao amin'ny Nanfang.com fa mety ho lasa fepetra haharitra fotoana ela ity “fepetra vonjimaika” ity. Nanomboka tamin'ny 4 Jiona tamin'ity taona ity, nanomboka nanery ny mponina tsy hanao fitafiana mampiavaka ny Miozolomana ny manampahefana ao Xingiang satria “tsy araka ny tokony ho izy” izany. Tamin'ny volana lasa teo, noraràn'ny manampahefana ao Xinjiang mihitsy ireo mpiasam-panjakana mba tsy hanaja ny fifadian-tsakafo amin'ny Ramadany.
Nisongadina tamin'ireo vavahadim-baovao lehibe sy ny media sosialy ny vaovao momba ny fandraràna ireo “fitafy dimy tsy araka ny tokony ho izy”. Somary nizarazara ny fanehoan-kevitry ny vahoaka. Etsy andaniny, naneho ny fanohanan'izy ireo izany fepetra izany ny maro, ary nanoro-hevitra mihitsy aza fa tokony hihitatra manerana ny firenena ny fandraràna. Ireto manaraka ireto ireo fanehoan-kevitra matetika hita avy amin'ireo mpanohana ny governemanta (tao amin'ny takelaka fanehoan-kevitra ao amin'ny Weibo, Chongqing Morning Post):
- Tsy tokony ho ferana ao an-tanànan'i Karamay ihany ny fandraràna, tokony handràra izany [fitafiana] izany ny firenena manontolo.
– Maro ireo firenena no mandràra ny fitafiana misy marika fivavahana tahaka izany eny imasom-bahoaka
– Manohana tsy am-pisalasalana, mila fanohanana matanjaka
– Tokony hijanona ho laika ireo Miozolomana raha tsy izany tsy ho tafavoaka
– Izany no lalana marina. Tokony ho ferana ao am-piangonana ihany ny fanao ara-pivavahana. Tokony hijanona ho laika ny toeram-bahoaka.
Etsy an-kilany, manontany kosa ny maro mikasika ny fahombiazan'ity fandraràna ity. Ity manaraka ity ireo fanehoan-kevitra notsongain'ilay mpisera Weibo Dapeng777:
- Loharanon'ady ny politika tahaka izany, mahatezitra olona
– Tsy tiako ireo mpampihorohoro ary mahatsiaro tsy mahazo aina aho mahita ireo mitafy marika volana sy kintana. Indraindray aho matahotra ireo Xinjiang mitafy akanjo mainty. Saingy tsy midika na inona na inona ny volombava lava, ary tsy tokony ampifandraisana amin'ny mpampihorohoro. Raha voaràra any anatin'ny fitateram-bahoaka izy ireo, dia hahatsiaro ho sorena ireo mponina mpandala ny nentim-pahazarazana indrindra ao Xinjiang
– Fifikirana ho mahatoky amin'ny resaka ara-poko. Taona maro taty aoriana, mbola manjaka ny fihetsika tahaka izany. Tsy hanao afa-tsy ny hampisy fifandirana bebe kokoa ny fanavakavahana mifototra amin'ny nasionalisma
– Manana volombava lavabe i Karl Marx hatramin'ny fahatanoràny…
– Mampatsiahy ahy ny fizarazarana ara-poko ao Afrika Atsimo ny [fandraràna]
Raha jerena ny fanenjehana ilay mpampianatra eny amin'ny oniversite Oyghur, Ibrahim Tohti, izay misolo-vava miaro ny fampihavanana ara-poko, sy ity politika famaizana tafahoatra vao haingana momba ny fitafiana Miozolamana ity, dia mbola hitohy ny ranomodin'ny fihetsiketsehana maherisetra sy ny famaizana. Araka ny nolazain'i Henryk Szadziewski, mpikaroka matihanina hoan'ny Tetikasa momba ny Zon'Olombelona Oyghur tamin'ny Foreign Policy, “Toa manome fitsipika ny manampahefana Shinoa fa ‘na miaraka aminay, na manohitra anay ianao’, ary manasazy izay tsy mifanaraka amin'izany”.